Ku soo Dhawaada Barnaamijka Ceymiska Dadka Aan Shaqeyn ee Minnesota / Applicants - Unemployment Insurance Minnesota
Ku soo Dhawaada Barnaamijka Caymiska Shaqo la’aanta ee Minnesota
Kani waa bog rasmi ah ee aad ka heleysid macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Caymiska Shaqo la’aanta ee Minnesota.
Ceymiska Dadka aan Shaqeyn waa barnaamij dowladeed ee ku caawiya marka aad shaqadaada lumiso ama badroonigaada yareeyo saacadaha shaqadaada.
Barnaamijku waxa uu ku siinayaa lacag adiga oo raadinayo shaqadaada kale. Lacagta waxay dabooshaa qeyb ka mid ah daqliga aad heshid marka aad shaqeyneysa waxaana laheli karaa muddo xadidan.
Macluumaad ku saabsan manfacyada shaqo la’aanta
Muuqaal cusub ayaad ku arkeysaa Koontada Ceymiska Shaqa-la'aanta ee Minnesota!
Iska ilaali in lagu khiyaamo
Isku day in aad intarnetka codsigaaga ku soo gudbiso (Axad ilaa Jimce 6-da subixii ilaa 8-da fiidkii).
Barnaamij turjumaad ah oo la yiraahdo Google Translate: Google waxa uu barnaamijkiisa lagu galo intarnetka kuugu hayaa turjumaad bilaash ah. Waa barnaamij si toos ah qoraal kasta intarnetka kuugu turjumaya. Si aad ula soo degto barnaamijkaas, waa in aad haysato barnaamijka lagu galo intarnetka ee Google Chrome (oo si bilaash ah ayaad ku heleysaa). Guji halkan si aad ula soo degto
Barnaamijka intarnetka ee Google Translate: Waa barnaamij aad ku sameyn karto in aad soo koobiyeysato qoraalka bogga Codsiga Ceymiska Shaqa-la'aanta (Unemployment Insurance Application) dabadeedna ku dhejiso bogga Google Translate. https://translate.google.com/
Yandex Translate: Waa barnaamij aad sidoo kale ku sameyn karto in aad soo koobiyeysato qoraalka bogga Codsiga Ceymiska Shaqa-la'aanta (Unemployment Insurance Application) dabadeedna ku dhejiso bogga Yandex translator. https://translate.yandex.com/
Miyaan codsadaa faa’idooynika?
Haddii aad mardhow weysay shaqadaada ama badroonigaaga yareeyey saacadahaaga, waa in aad codsataa. Codsiga waa sida aad noogu sheegtid inaad shaqo la’aan tahay.
Goorma ayaan codsadaa?
Waa in aad u codsataa sida ugu dhaqsaha badan ee aadan shaqeynin markale ama badroonigaaga yareeyay shaqadaada. Haddii aad sugtid inaad codsato, waxaad lumin kartaa faa’idooyinkaaga.
Sidee ayaan ku ogaanayaa haddii aan u qalmo?
Qaabka lagu garanayo haddii aad u qalantid waa buuxinta foomka.
Waxaaan ku weydiineynaa shaqadaada ugu dambeysay iyo sababta aadan markale u shaqeynin hadeer.
Waxaan weydiineynaa badrooniyadaada hadeer isla su’aalaha.
Kadib waxaa eegeynaa warbixinta oo go’aansanaa haddii aad u qalantid sida ku saleysan Sharciga Minnesota.
Waxaan kuu soo direynaa ogeysiin kuu sheegayo haddii aad u qalantid ama aadan u qalmin faa’idooyinka.
Maxaan u baahannahay si aan u codsado?
Waxaan u baahannahay warbixinta xigta marka aad codsaneysid. Diyaarinta warbixintaan waxay kuu fududeyneysaa inaad buuxiso codsigaaga.
Warbixinta xiriirka (magaca, ciwaanka, iyo lambarka taleefonka)
Lambarka Shatiga Gaari kaxeynta ama lambarka aqoonsiga
Waraaqda oggolaanshaha shaqada haddii aadan aheyn muwaadin Mareykan ah
Taariiqda Shaqada ee 18-kii bilood ee ugu dambeysay, oo ay ku jiraan:
Magaca, ciwaanka iyo lambarka taleefonka mid kasta ee aad u shaqaysay
Taariiqaha bilowga iyo taariiqaha shaqada
Qiimaha lacag bixinta
Sababta aadan markale ugu shaqeynin badrooniga
Lambarka akoonka bangiga iyo wareejinta, Haddii aad jeclaan laheyd lacag bixinadaada in si toos ah laguugu soo shubo akoonka bangigaaga
Waxaa jiro labo wado ee lagu codsado, onleenka iyo taleefon ahaan.
Waxaad ka codsan kartaa onleenka oo af Ingiriis ah. Wixii warbixin ah ee sida loogu codsado onleenka, booqo “How do I apply?” Waxaad ka codan kartaa onleenka Isniinta illaa Jimcaha, 6 a.m. illaa 6 p.m.
Waxa aad ku codsan kartaa Soomaali telefoonka
Isniinta illaa Jimcaha, 8:00 a.m. illaa 4:30 p.m.
651-296-3644 Aagga Magaalooyinka Mataanaha Metro
877-898-9090 Inta ka baxsan aagga Magaalooyinka Mataanaha
866-814-1252 Dadka dhagoolka ah ama maqalka ku adagtahay yahay
Wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan codsashada oo taleefon ahaan ah, Daawo Soo dhaweynta fiidiyowga barnaamijka Caymiska Shaqo la’aanta (video, 23:22).
Maxaa dhaca markaaan codsado kadib?
Dhoor maalmood kadib markaad buuxiso codsigaaga waxaad heleysaa dhoor dukumintiyo ee boostada ah. Dukumintiyadaan waxay ahaanayaan af Ingiriis. Waa muhiim inaad fahamtid warbixinta aad naga heshay inaga. Waxaan ku weydiin karnaa warbixin dheeraad ah. Soo wac Xarunta Adeegga Macaamiisha haddii aad u baahantahay caawin fahamka dukumintiyadaan ee aad heshay. Waa caawin buuxdo inaad ku haysatid dukumintiyada hortaada marka aad soo waceysid.
Wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan waxa dhaca markaad codsatid kadib, iyo dukumintiyada aad heleysid, Daawo Soo dhaweynta fiidiyowga barnaamijka Caymiska Shaqo la’aanta (video, 23:22).
Sidee ayaan lacagta ku helaa?
Si aad u heshid lacagta faa’idooyinka waa inaad codsataa lacag bixinta isbuuc walba aadan shaqeynin ama badroonigaada yareeyo saacadahaaga.
“Isbuuca” aad codsaneysid marwalba waa isbuuca la soo dhaafay ee ka bilowdo Axada oo maro illaa Sabtida. Waa muhiim inaad codsatid lacag bixinra xitaa haddii akoonkaaga la sugayo iyada oo aan go’aansaneyno u qalmidaada.
Waxaa jiro labo wado ee loogu codsado lacag bixin, onleenka iyo taleefon ahaan.
Waxaad ka codsan kartaa lacag bixinta onleenka oo af Ingiriis ah. Wixii warbixin ah ee sida looga codsado lacag bixinta onleenka, booqo “How do I get paid?” Waxaad ka codsan kartaa onleenka Isniinta illaa Jimcaha, 6 a.m. illaa 6 p.m.
Waxa aad lacagta ku codsan kartaa Soomaali adiga oo soo waca mid ka mid ah lambaradaan:
Jadwalkaan wuxuu ku tusinayaa sida maalintaada ama waqtiga laguu xilsaaray ee aad ku codsatid lacag bixinta taleefon ahaan.
Haddii lambarka ugu dambeeyo
ee Lambarkaaga Amniga
Bulshada uu yahay:
1, 3, ama 5
6am illaa duhurka
7 ama 9
duhurka illaa 6pm
0, 2, ama 4
6am ilaa duhurka
6 ama 8
Khamiis ama Jimce
6am ilaa 6pm
Dooqa “Request a Benefit Payment” waxaa kaliya oo la heli karaa haddii ay tahay waqtigaaga balanta ee aad soo wacdid. Marka aad soo wacdid raacida tilmaamahaan:
Geli Lambarka Amniga Bulshada
Geli furahaaga oo riix aastaanta # ee teebkaaga
Dhageyso fariimaha ku saabsan akoonkaaga
Dooro dooqa “Request a Benefit Payment”
Wixii warbixin dheeraad ah eek u saabsan codsashada lacag bixinta ee taleefonka ahaanta daawo Soo dhaweynta fiidiyowga barnaamijka Caymiska Shaqo la’aanta (video, 23:22).
Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino!
Nasoo haddii aad su’aalo qabtid ama Wakiilada Adeegga Macaamiilka waxaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8:00 a.m. illaa 4:30 p.m.
Haddii aad jeclaan laheyd turjubaan, u sheeg wakiilka luuqada aad ku hadashid oo turjubaan. Ayaa lagu darayaa wacitaanka. Waxaad u baahaneysaa inaad sugtid dhoor daqiiqo inta ay ka wacayaan turjubaan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee sida loo waco wakiilka, fiiri Ka Hel Jawaabaha Su'aalaha Ku Saabsan Shaqala'aantaada.